पर्दा पछाडीको चर्चित आवाज तर गुमनाम स्वरूप ‘बिष्णु माझी’ « Postpati – News For All
पर्दा पछाडीको चर्चित आवाज तर गुमनाम स्वरूप ‘बिष्णु माझी’
सालको पात टपरी हुनी, नहुनी सल्लैको,
तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लैको‘
गीतले डेढ करोड भ्युज कटाएपछि केही दिनअघि ‘सेलिब्रेसन’ कार्यक्रम गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गीतसँग प्रत्यक्षरपरोक्ष गाँसिएका सबै उपस्थित थिए, सिवाय गायिका विष्णु माझी ।
अहिले एक–दुईवटा गीत हिट हुनासाथ गायक–गायिकाहरुलाई स्वदेश तथा विदेशका कार्यक्रमहरुमा निम्तो आउन थाल्छन् । चलेका गायक–गायिकाहरुका लागि त विदेश यात्रा पानी पँधेरो धाएजत्तिकै हुन्छ । यस हिसाबले सयौं हिट गीत दिएकी विष्णु पनि देश–विदेशका कार्यक्रममा व्यस्त रहनुपर्ने हो ।
तर, उनले अहिलेसम्म विदेशमा पाइला पनि टेकेकी छैनन् । स्वदेशकै मेला–महोत्सवमा पनि उनी पुग्दिनन् । जब कि उनको सबैतिर चर्को डिमान्ड छ ।
सोही प्रतियोगितामा भाग लिन आएका थिए पोखरेली लोकगायक सुन्दरमणि अधिकारी । उनले कुनै पुरस्कार जित्न सकेनन् । विष्णुको स्वर सुनेर सुन्दरमणि मोहित भए । विभिन्न दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा भाग लिँदै आए पनि उनी खासै सफल हुन सकेका थिएनन् । विष्णुसँग जोडी बनाएर गाउन पाए आफू पनि सफल हुन्थेँ भन्ने मोह उनलाई जाग्यो । नारायणसित उनको पुरानो चिनजान थियो । उनले नारायणलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गरे ।
लेखनाथ महोत्सवमा भाग लिनु अगाडि नै विष्णुको स्वर रेकर्ड भइसकेको थियो । भगवती न्यौपानेको लय संकलन तथा प्रजापति पराजुलीको शब्द रहेको ‘आमाले अर्ति दिने घर जाने बेला।’ बोलको गीत ०६० सालतिर पोखराको फेवा स्टुडियोमा रेकर्ड भएको थियो । विष्णु काठमाडौं आएपछि प्रजापति र नारायणले बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सकेनन् ।
रिमोट सुन्दरमणिका हातमा
२५ सय मात्र पारिश्रमिक लिने उनी धेरैको रोजाइमा पर्न थालिन् । धेरैतिरबाट कार्यक्रमका लागि अफरहरु आउन थाले । तर, गीत रेकर्डिङका लागि स्टुडियो जानेबाहेक विष्णु कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गाउन गइनन् । ०६४ सालसम्म उनी चर्चाको शिखरमा पुगिसकेकी थिइन् । उनी दैनिक ५–६ वटा गीतमा स्वर भर्न भ्याउँथिन् । उनीसँग काम गर्न चाहनेले सुन्दरमणिमार्फत डिल गर्नुपर्थ्यो र पर्छ ।
हल्ला यस्तो पनि चल्यो कि सुन्दरमणिले विष्णुलाई अविवाहित अवस्थामै बन्धक जसरी घरभित्रै थुनेर राखेका छन् र उनैले विष्णुलाई सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलबाट टाढा राखेका हुन् । यस्तो चर्चामा आजसम्म न सुन्दरमणिले कुनै सफाइ दिएका छन् न विष्णुले ।
केही समयअघि कवि लेखक बादल घिमिरेले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे, जसमा उनले विष्णुको वास्तविकता बाहिर ल्याउन खोज्दा आफूमाथि अपरिचितबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको उल्लेख गरेका थिए । उनको स्टाटसको सार थियो, ‘मेरो घरबाट विष्णुको घर करिब १५ मिनेटको दुरीमा पर्छ । विष्णुको स्वर नसुन्ने त यो देशमा विरलै होलान् । तर, उनको भूमिगत जिन्दगीका बारेमा कमैलाई थाहा छ । आखिर विष्णुलाई कसले यस्तो बनायो र ? उत्तरः सुन्दरमणिले । विष्णु गीत गाउँछिन्, सुन्दरमणि पैसा बुझ्छन् ।’
घिमिरेले अगाडि लेखेका छन्, ‘विष्णुको जीवनको रिमोट नै सुन्दरमणिको हातमा छ । लाग्छ, विष्णुले श्वास फेर्न पनि सुन्दरमणिकै अनुमति लिनुपर्छ । हुन त केही वर्ष अगाडि सुन्दरले विष्णुसँग बिहे गरे भन्ने सुनियो । तर, आफ्नै श्रीमतीलाई भूमिगत शैलीमा बाँच्न बाध्य पार्ने अधिकार श्रीमानसँग हुन्छ र ? विष्णु सुन्दरमणिको नजरबन्दमा छिन् । यो कुरा किन बाहिर ल्याउँदैनन् पत्रकारहरु ? हिरोइनको पाइन्ट एक इन्च तल भरेको समाचार लेख्ने मिडिया किन उनको समाचार लेख्दैनन् ?’
सहकर्मीहरु भन्छन्ः विष्णुको ‘भूमिगत’ जीवन स्वेच्छिक
हामीले ‘सालको पात’ गीतका संगीतकार बसन्त थापासँग पनि विष्णुका बारेमा आएका हल्लाहरुको विषयमा सोध्यौं ।
‘के कारणले उहाँ आफूलाई लुकाउन चाहनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा भएन । तर, यो सत्य हो कि उहाँ सार्वजनिक हुन चाहनुहुन्न । फोटो खिच्न पनि मान्नुहुन्न । कसैसित घुलमिल बन्नुहुन्न ।’
उनीहरु दुबैले सार्वजनिकरुपमा यसबारे स्पष्ट नपारेसम्म फ्यानहरुको कौतुहल र चिन्ता समाप्त नहुने देखिन्छ । अनलाईन खबरबबाट
उपत्यकामा थप ६१८ जनामा कोरोना संक्रमण